Mr Qaaxo oo 8 Bilood, ka Dib Dilkii Dolal Bililiqaystay Darajada Dr. – Rasaasa News
Mr Qaaxo oo 8 Bilood, ka Dib Dilkii Dolal Bililiqaystay Darajada Dr.
Waxaa jirta odhaah Somali ah oo aad u qeexda dadka sheegta wax ayna ahayn “nin is faanshay waa ri is nuugtay”, waxaa kale oo dhaqankeena suuban iyo diinta Islamka aad ugu fool xun beenta, waana meesha duqa Somalida Ogadeeniya ka yidhaah “Eebahay been iguma qabanin”.
Maxamed Ismaciil Cumar [Mr Qaaxo], waa nin ay dadka Somalida Ogadeeniya garanayaan, Mr Qaaxo waxaa uu ku dhashay tuulada caado oo ka tirsan gabalka wardher, 71 sano ka hore, waxaana uu ka mid ahaa ardaydii ugu horeysay ee lagu furay Iskuulka Qabridahare. Waxaana ka mid ahaa ardaydii ay isku ayniga ahaayeen ee ay Iskuulka isla galeen Cabdi-Kaaf, Duran, Bucul,Sanwaa, Fiidmeer iyo kuwo kale oo badan oo aanan magacyadooda haynin.
Kolkii uu bilowday dagaalkii 1963, ayaa la xidhay iskuulka Qabridahare dagaalka dartii, badibana ardaydii Iskuulka dhigan jirtay waxay u qaxeen dalka Somaliya iyaga oo doonaya fursado shaqo ama tacliin, intii tagtay Somaliya, waxay badidood shaqooyin ka heleen dalka Somaliya, in yar ayaa fursad tacliin dugsi sare heshay.
Mr. Qaaxo, waxaa uu ka mid ahaa dhalinyaradii tagtay Somaliya ee nasiibka u helay in ay shaqo helaan, waxaa uu bartay teebka, waxaana uu shaqo Karaaninimo ka helay dawlada hoose ee muqdishu.
Dabayaaqadii sanadkii 1974, waxaa uu ka qayb galay banaanbixii muqdisho ee ay sameeyeen dhaqdhaqaayadii horseeday dhalashadii Jabhadii Somali Galbeed. Waxaa uu ka tagay shaqadii Karaaninimada, ka dib kolkii uu madax noqday nin ay ilmo Abti ahaayeen oo ay isku Iskuulana ahaayeen, islana soo galeen dalka Somaliya, waxaana shaqo loo geeyey wasaarada horumarinta iyo reer miyiga.
Kolkii dambe Mr Qaaxo waxaa uu shaqo ka helay xafiiskii ay Jabhadii Somali Galbeed ku lahayd Muqdisho, kolkii dambena waxaa laga dhigay wakiilka Jabhada Somali Galbeed ee dalka Aljeeriya. Burburkii dawladii Somaliya wax yar ka hor ayuu galay dalka Jarmalka, halkaas oo looga diiday in sharci laga siiyo.
Mr. Qaaxo, waxaa uu toboneeyadii sano ee ugu dambaysay kula noolaa caruurtiisa dalka Australia, halkaas oo uu ku ahaa qaxooti ay noloshiisu ku xidhan tahay xooggaaga faraqabsiga ah ee la siiyo caruurta iyo in yar oo hawlgabnimo ah, wax shaqo ahna wali kama qaban dalka Australia, waayo wuxuu yimid isaga oo hawlgab ah, fasal uu tacliin u fadhiisto waxaa ugu dambaysay Iskuulkii Qabridahare.
Mr. Qaaxo, waxaa todobaadkii hore waraystay, bogga Qorahey.com, ee ay Ergisada ugu haysto Jwxo-shiil, gabadha gabayda, waxaan arkay ciwaan ah “RF International Interview: Dr. Mohamed Ismail Omar deputy chairman of Ogaden National Liberation Front [ONLF]“, kolkaas ayaan is idhi bal dhagayso, waxaa iga dhaadhici wayday in uu Mr. Qaaxo yahay ruuxani. Qaaxo waxaa uu lee yahay “985 askari oo Itobiyan ah ayaan hal maalin dilay, todoba saldhigna waanu qabsanay”, taas waxaa ka horeysay Ina dhuubo oo isna waraysi ku bixiyey in ay dileen 450, waxaa xigay war saxaafadeed uu Qaaxo ku qoray bogga Ogaden.com oo ahaa 626, ayaanu dilay todoba magaalana waanu qabsanay. Saddexdaas war ee uu midba walba midka kale burinayo, wuxuu ku qoran yahay bogga Jwxo-shiil ee ogaden.com.
Waxaase iigala yaab badnaa beenta warka uu sheegayo Mr. Qaaxo, darajada beenta ah ee uusan lahayn ee uu sheegtanayo [corrupted title], taas oo ah in uu yahay Doctor. Darajada dhoktor labo shahaado mid kood ayaa lagu noqon karaa; dhakhtar bartay tacliinta caafimaadka iyo shahaadada Phd.
Hadaba, laba mid uun weeye sheegashada magaca dhoktor ee Mr. Qaaxo, in uu dhaxlay magacii Dr. Dolal maadaama uu ka mid yahay 4 nin ee abaabulay dilkiisa iyo in marka la gaboobo la qaato magaca dhoktor, labadan arimood oo aanan anigu ka warhaynin in ay dhici karaan midkood, ayey cuskanaysaa sheegashada magaca Dr, ee Mr.Qaaxo.
Fiiro Gaar ah: raali galin hadii aanu khaladnay magacyada ama da,ada dadka qoraalkan ku jira
Jwxo-shiil oo Maanta Lagu Xidhay Magaalada Caasmara